Wadamo badan ayaa joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee kala duwanaanshaha COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wadamo badan ayaa joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee kala duwanaanshaha COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegay in tirada badan ee isbeddellada cusub ee isbeddellada cusub ee la helay ay keenayso walaac xooggan oo ku aaddan sida ay u saameyn doonto ogaanshaha, daaweynta iyo tallaallada.
Madaxa Komishanka Yurub Ursula von der Leyen, ayaa maanta, si degdeg ah ugu baaqday dhammaan safarrada hawada ee lagu tagayo iyo ka imanaya waddamada laga soo sheegay kiisaska cusub ee COVID-19 in la joojiyo ilaa dawladda iyo saraakiisha caafimaadku ay si fiican u fahmaan khatarta cusub. kala duwanaanshaha fayraska.
Denmark, Morocco, Filibiin iyo Isbaanishka ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyay ee xayiraad dhanka safarka ah ku soo rogay dhammaan safarrada aan muhiimka ahayn.o Koonfur Afrika iyo dawladaha deriska ah, ku biirista liiska sii kordhaya ee wadamada leh xannibaadaha 'super mutant' ee COVID-19.
The Midowga YurubKu dhawaaqida Danmark iyo Isbayn ayaa timid ka dib markii ay ku biireen wadamada kale ee Yurub, si loo xaddido safarka gobolka, halka, caalamiga ah, Morocco iyo Filibiin ay qaadeen tillaabooyin la mid ah oo lagu xaddidayo dhaqdhaqaaqa koox waddamo ah oo loo arko inay halis ku jiraan.
Jarmalka ayaa ku dhawaaqay Koonfur Afrika "Aag kala duwanaansho fayras," wasiirka caafimaadka ee dalka Jens Spahn ayaa ku soo qoray Twitter. Waxay la macno tahay "shirkadaha diyaaradaha waxaa loo ogolaan doonaa oo kaliya inay Jarmalka ka soo qaadaan" dalka.
Dhammaan imaatinka waxaa looga baahan doonaa inay karantiil galaan 14 maalmood, xitaa haddii si buuxda looga tallaalay COVID-19 ama ay ka soo kabsadeen, Spahn ayaa raaciyay.
Maamulka Nederland ayaa isna sameeyay tillaabo la mid ah kan, iyagoo ku dhawaaqay in la mamnuucay duulimaadyada ka imaanaya Koonfur Afrika ee taga Holland saqdii dhexe ee xalay.
Talyaaniga iyo Czech Republic ayaa sidoo kale si degdeg ah u raacay waddamada kale ee Yurub iyagoo soo rogay xayiraad.
Rome waxay mamnuucday inay soo galaan dhammaan dadka ka imaanaya Koonfur Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia iyo Eswatini. Prague ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan u dhalan Koonfur Afrika aan loo ogolaan doonin Czechia.
Gelinkii dambe ee maalinta, Faransiisku wuxuu sheegay inay joojinayaan duullimaadyadii ka imanayay koonfurta Afrika ugu yaraan 48 saacadood, iyadoo Wasiirka Caafimaadka Olivier Veran uu ku dhawaaqay in dhammaan dadkii dhowaan ka yimid gobolka la tijaabin doono oo si dhow loola socdo.
Raiisel wasaaraha Faransiiska Jean Castex ayaa shaaca ka qaaday in wadahadalada u dhexeeya hogaamiyaasha Midowga Yurub ee ku saabsan sida looga jawaabayo nooca cusub, oo aan ilaa hadda laga helin qaaradda, ay dhici doonaan “saacadaha soo socda”.
The Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegay in tirada badan ee isbeddellada cusub ee isbeddellada cusub ee la helay ay kor u qaadayso walaac xooggan oo ku aaddan sida ay u saameyn doonto ogaanshaha, daaweynta iyo tallaallada.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay sidoo kale xaddidday safarka hawada ee lagu tagayo lagana imanayo Koonfur Afrika iyo deriskeeda, iyadoo Hay'adda Ammaanka Caafimaadka ee waddanku ay sheegtay "Kani waa kala duwanaanshiyaha ugu xun ee aan aragno illaa hadda."
Wadamada ka baxsan Yurub ayaa sidoo kale ka walaacsanaa kala duwanaanshiyaha cusub, iyadoo Malaysia, Japan, Singapore iyo Bahrain ay ku soo rogeen xayiraad dadka safarka ah ee ka imaanaya gobolka koonfurta Afrika.
Israa'iil sidoo kale waxay mamnuucday dadka ka imaanaya koonfurta Afrika Laakin markaas balaariyay 'aagga cas' ilaa qaarada oo dhan, kaliya marka laga reebo qaar ka mid ah quruumaha waqooyi-Afrika.